WOWOW Rano famoahana an-dakozia roa miaraka amin'ny sisin'ny mpanefy stainless steel
Home / Fitaovana an-dakozia / Sintomy ny fako an-dakozia / WOWOW Faucet ao an-dakozia roa miaraka amin'ny vy tsy manara-penitra
ity faucet ity dia misy ny lafiny sprayer. Ny fanamorana ny asa fanadiovana isan'andro dia azonao atokisana tsara, satria fantatrao fa naverina tamin'ny alàlan'ny karazan-jery voafetra ny paompy an-dakozia.
Sisiny famatsiana lakana faucet 23118A4
Side faucte an-dakozia dia tonga amin'ny endrika maro, endrika sy habe. Ity boaty fanamainam-baravarankely manokana amin'ny WOWOW ity dia miaraka amin'ny mpanaparitaka ampaham-pitaovana izay azonao ampiasaina hanamboarana ny masonao maloto, lapoaly ary lovia. Ny lafiny sprayer azo antoka dia afaka mamita ny raharaha andavanandro ho asa tsotra sy mahafinaritra. Ny fantsom-baravarankely WOWOW dia apetraka eo akaikin'ny sisiny amin'ny famonosana ny lakozia, ary vonona ny hisintona azy avy hatrany. Miaraka amin'ny sakelin'ny rano lava 60 santimetatra eo am-pandroana. Indrindra fa ny lakozian-tsolonao dia manana fatana indroa, ity mpanamory sisin-dàlana ity dia mety ho tena mahomby. Ny toerana rehetra, ny zavatra na ny zoro ao anatiny sy ny manodidina ny lakozian-dakozonao dia mety ho tratran'ny fantsom-baravarankely amin'ny alàlan'ny WOWOW 'sisiny mpanaparitaka.
Ny lafiny sprayer dia ahafahanao manosika mivantana ny rano amin'ny tsindrio tsotra amin'ny bokotra aoriana any amin'ny sisin'ny sprayer. Ankoatry ny mialoha ny rinsing dia azonao atao ny mampiasa ny sprayer sisiny koa amin'ny fanasana tànana, na asa an-dakozia. Ny vavan'ny rano eo amin'ny sisiny dia ampifamatotra amin'ny poketra sy ny famatsian-drano azy amin'ny alàlan'ny fantsona manokana. Ity fantsom-pifandraisana ity dia mifehy ny fitantanana ny rano rehefa ampiasaina ny lafiny sprayer. Amin'izany fomba izany dia mety hiainanao rano mikoriana faran'izay tsara ianao mba hahafahana manadio ny takelaka, nefa tsy manala ny heriny.
Famoronana an-tsisin-tsolika vita amin'ny sisiny
Ity lafiny mpanapahana an-dakozia an-tsambo an'ny WOWOW dia natsangana tamina fikarakarana sy ezaka mafy. Ny mpamorona ny WOWOW dia naniry ny hanambatra ireo endri-javatra isan-karazany mba ho tonga amin'ny endrika modely, lamaody ary ambonin'izy ireo amin'ny famoronana gripo amin'ny plastika feno fahasimbana. Namboarina endrika volavola avo lenta, satria ny antsoina hoe gooseneck dia avy hatrany manome kiraro kanto amin'ny grositra an-dakozia. Amin'ny lafiny iray, ny tànana roa dia namboarina mba hanomezana tanana manokana ity sisintany sprayer an'ny WOWOW ity. Voalohany, nifidy tanana roa nofidina mba hanome fiantraikany mampitolagaga amin'ity lafiny an-dakozia fanam-boankazo ity. Faharoa, ny famonon-tanana dia nahazo famolavolana manokana tsy misy dikany mba hahafahana manamboatra an'ity lafiny an-dakozia an-tsambo ity amin'ny famoahana maso any an-dakozia.
Ny famaranana krôma manokana an'ny sisin-tsolika WOWOW dia mitondra taratry ny hatsikana tokoa. Amin'ity fomba ity no hahatratrarana fitaratra endrika toy ny fitaratra, izay mety ho natambatra amin'ny fomba fananganana haingo. Ny sisin'ny fantsom-baravarankely amin'ny sisiny stainless vy, toetra manondro ny endriny indostrialy, miaraka amin'ny tombony tsara amin'ny lafiny tsara fa maharitra ela. Ny famaranana tsy mihetsika dia mety hameno indrindra ny fisehon'ny fandroahanao amin'ny lakozia. Ny famolavolana lakozia (vaovao) dia azo antoka fa hahazo fiakarana miaraka amin'ireto faucet boiteur amin'ny fomba mahagaga ity.
Voalohany kilasy mpanamory sakamalaho an-dakozia
WOWOW dia fantatra amin'ny sehatra iraisam-pirenena hanolotra faucets an-dakilasy kilasy voalohany amin'ny vidiny mora. Azonao atao ny milaza fa ny WOWOW dia manolotra vidiny tsara indrindra amin'ny vola. Ny ankamaroan'ny marika A-marika dia mandoa triple na quadruple aza ny vidin'ny vidin'ny WOWOW amin'ireo faucets any an-dakozia, ary ny kalitao dia azo antoka fa tsy latsaky ny sasany amin'ireo A-brand ireo. Afaka milaza marina isika fa ny hatsarantsika dia tsara kokoa noho ny marika A-marika maromaro. Porofintsika miverimberina izany.
Satria matoky ny sandan'ny vola izahay dia atolotray anao mandritra ny 5 taona. Raha simba ny sisinao amin'ny fanaparitahana ny sisinao amin'ny lafiny iray dia ho simba ny WOWOW amin'ny alàlan'ny marika vaovao. Tsy misy olana. Satria ny ankamaroan'ny mpamatsy, na ireo marika A-marika aza dia manome fe-potoana tokana mandritra ny 1 taona, amin'ny WOWOW heverintsika fa tokony mihoatra lavitra noho ny fenitry ny indostria isika. Raha simba ny sisinao amin'ny famonosana ny sisinao, dia mety ho simba rehefa afaka 2 na 3 taona fotsiny, dia tsy heverinay fa rariny raha miatrika izany ianao. Ny fantsom-baravarankely sisin-dranomasina dia tsy tokony hisalasala mandritra ny 5 taona farafahakeliny, ary amin'ny WOWOW dia mandray ny andraikitray amin'izany isika.
Stafika vita amin'ny vy amin'ny vy
Ity faucet an-dakozia famafazana lafiny ity dia vita tamin'ny akora ambony sokajy. Voamarikao avy hatrany izany rehefa mihazona ity fantsom-pisakafoanana any an-dakozia ity ianao. Mahavariana ny lanjany saika 50 oz, ary manambara ny kalitaon'ny fitaovana ampiasaina. Satria ny mavesatra an-dakozia mora vidy indrindra dia mavesatra, satria ny fampiasana faran'izay kely ny fitaovana, na koa ny tsy fisian'ny fitaovana vy, WOWOW dia mirehareha amin'ireo fitaovana kilasy ambony izay ampiasaina. Fampifandraisana varahina, singa vy tsy misy fangarony ary valizy sy fantsona avo lenta. Mahamarika kalitao ianao rehefa mahita azy io, ary miaraka amin'ny faucet lakozia ao an-dakozia WOWOW izay tsy ho hafa.
Ankoatry ny lanjany, ny fampiasana ireo fiasa samy hafa an'ity fantsom-pisakafoanana any an-dakozia ity dia mampiharihary ihany koa ny kalitaon'ity fitaovana an-dakozia ity. Ny fomba mihazakazaka tsara ny tahony nefa tsy misy fikorontanana na fihemorana ohatra. Ny fahamendrehana hampiasana ny fantson-drano amin'ny famafazana sisiny etsy ankilany, ary ny fihemorana amin'ny toerany tany am-boalohany. Ary koa ny fomba mora amin'ny fampiasana an'ity sprayer sisiny mialoha ny fanasan-damba ity miaraka amin'ny bokotra vy tsy misy fangarony. Izany rehetra izany dia manampy amin'ny kalitao madio tsy misy ady.
Faucet sisina mora ampiasaina amin'ny fametrahana
Ny fantsom-pisakafoanana any an-dakozia dia mora ampiasaina. Rehefa tonga miaraka amin'ny kitapo fametrahana tanteraka dia azonao atao ny mametraka ity fantsom-pisakafoanana ao an-dakozia ity ao anatin'ny antsasak'adiny. Ary tsy mila plumber lafo akory ianao. Ny torolàlana mazava dia ahafahanao mametraka ity fantsom-pisakafoanana ao an-dakozia ity, tsy mampiasa fitaovana sarotra. Ny fitaovana rehetra hametrahana an'ity kanto kanto ao an-dakozanao ity dia tafiditra ao.
Satria manana mpanjifa iraisam-pirenena miha-mitombo ny WOWOW, izay miverina amin'ny WOWOW rehefa mila faucet hafa izy ireo, dia manome anao antoka miverina 90 andro. Ankoatry ny 5 taona fiantohana tsy misy risika dia hamerina ny volanao ianao raha sanatria tsy ho gaga ianao amin'ny sandan'ny vola azonao amin'ity faucet an-dakozia ity. Mahazo famerenam-bola feno ianao nefa tsy misy fanontaniana apetraka aminao. Ny fanandramana anay dia milaza aminay fa tsy ilaina izany, fa hanana anao ho mpanjifa hafa mandritry ny WOWOW izahay!
Ny tombony azo avy amin'ny sisin'ny lakilasera amin'ny sisiny amin'ny fomba fohy:
• Mpamatsy fiadiana mahery vaika mialoha
• Famolavolana mahatalanjona sy sahy
• Fehiloha mitantana tsara
Ampahany : 23118A4 Sokajy: Fitaovana an-dakozia, Sintomy ny fako an-dakozia Tags: Nickel nopotehina, Fehilasy mitokana, side Sprayer